पेट दुखेर अस्पताल भर्ना भएकी रीतालाई आफ्नै श्रीमान् र देवरले यस्तो के गरे ? — Imandarmedia.com
आज : २०७५ कार्तिक ६ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
भारतमा एक पुरुषले आफ्नै पत्नीको मिर्गौला चोरेका छन् । मिर्गौला चोरेको आरोपमा महिलाका श्रीमान् र देवर पक्राउ परेका छन् । दुई वर्षअघि पेट दुखेर अस्पताल भर्ना गरिएकी ती महिलाको ऐपेन्डिक्सको शल्यक्रिया भएको थियो ।
१ सय ८१ जनाको संयुक्त परिवार जहाँ हरेक दिन होटलमा भन्दा बढी खाना पाक्छ
एउटा यस्तो समूदाय जहाँ बिहे अघि बच्चा अनिवार्य जन्माउनुपर्ने
सुर्खेतमा जीप दुर्घटना हुँदा ३२ घाइते, ५ काे अवस्था गम्भीर
कृष्णनगरमा फेरी कर्फ्यू लगाइयो, केछ अवस्था ?
लुक्लामा एयर डाइनेस्टी र माउन्टेन एयरको हेलिकोप्टर ठोक्किए !
दुखद खबर: इसाइ-मुस्लिमबीच हिंसात्मक झडप, ५५ जनाकाे मृत्यु
काठमाडौंमै भेटियो नक्कली नोट बनाउने कारखाना
गृहमन्त्रीले स्वीकृत यस्तो नयाँ कार्यविधि